एकाबिहानै चीनको यस्तो सन्देशले ओली प्रचण्डको हो'स् उ'ड्यो, के छ सन्देशमा ? के चाहन्छ चीन ? -
Home News एकाबिहानै चीनको यस्तो सन्देशले ओली प्रचण्डको हो’स् उ’ड्यो, के छ सन्देशमा ?...
एकाबिहानै चीनको यस्तो सन्देशले ओली प्रचण्डको हो’स् उ’ड्यो, के छ सन्देशमा ? के चाहन्छ चीन ?
एकाबिहानै चीनको यस्तो सन्देशले ओली प्रचण्डको होस् उ:ड्यो, के छ सन्देशमा ? के चाहन्छ चीन ?
मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै सरकारले २४ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दिएको छ । तर प्रायः आयोजना लामो समयदेखि पूरा हुन सकेका छैनन् । ठूला र सबैको चासोमा परेका आयोजनाको प्रगति अति सुस्त छ । एउटा उदाहरण हो, मेलम्ची खानेपानी आयोजना । काठमाडौंबासीले मेलम्चीको पानी आउला र उपभोग गर्न पाइएला भनेको लामै समय भयो । अझै पानी कहिले आउँछ, टुंगो छैन । खानेपानी मन्त्रालयले भने समयसमयमा पानी ल्याउने समय घोषणा गर्न बिर्संदैन ।
तर मेलम्चीको पानी मेलम्चीमै रह्यो । उपत्यकामा १७ करोड लिटर खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा सुरु भएको आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सकिनुपर्ने हो । तर पटकपटक समय थपिए पनि काम सकिएन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९५ दशमलव १२ प्रतिशत प्रगति रहेकामा अहिले ९८ दशलमव ५ प्रतिशत छ । ‘पूर्ण रूपमा परीक्षण गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले भने, ‘हेडवर्क्सको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । पानी परीक्षण गर्ने समयभित्र यसको निर्माण पनि सकिनेछ ।’ परीक्षण सफल भए त्यही हेडवर्क्सबाट स्थायी रूपमा पानी चढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
अर्को बहुप्रतीक्षित आयोजना हो, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना । ४ सय ५६ मेगावाटको यो आयोजना २०६७/६८ देखि सुरु भई २०७२/७३ मा सक्ने लक्ष्य थियो । आयोजना अहिले अन्तिम चरणमा छ । तर अझै सकिएको छैन । यसको भौतिक प्रगति ९९ दशमलव ८ प्रतिशत छ । चैतबाट विद्युत् परीक्षण गर्ने योजना रहेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘कोभिड महामारीका बेला पनि हामीले काम गर्दै गयौं, यसका बाबजुद पनि प्राविधिक समस्या आइपरे,’ उनले भने, ‘त्यसको पनि विकल्प खोजेर काम गरिरहेका छौं ।’ चैतसम्म पूर्ण जडानको काम सकेर परीक्षण गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
गौरवका आयोजनामा पुरानो हो, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसाथ २०४२ सालमै योजना अघि सारिएको हो । तर आयोजना अझै सकिएको छैन । हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको पनि दशक नाघ्यो । समयअवधि सकिन दुई वर्ष बाँकी छँदा भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र आयोजना निर्माण सक्नुपर्ने छ । २०६६/६७ बाट सुरु आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५७ दशमलव ७ प्रतिशत छ । अहिलेसम्म ३७ अर्ब ५४ करोड ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
गौरवका आयोजनामध्ये केहीले भने आशा जगाएका छन् । गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम लकडाउनमा पनि रोकिएन । जति जनशक्ति उपलब्ध थिए, त्यतिबाटै काम अघि बढ्यो । यति बेला चीनबाट प्राविधिक आइनपुग्दा भने उपकरण जडानका काम रोकिएका छन् । तोकिएको समयमा भने यो आयोजना नसकिने निश्चितप्रायः छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ९४ र पोखराको ६८ प्रतिशत छ ।
Previous articleभा’इरल Sachin Pariyar र Radhika Hamal को पहिलो भेटमै क’डा दोहोरी ! संचिनले जिस्काउदा राधिका मु’र्छा
Next articleआज भयं’कर रि’साए ओली, प्रचण्ड माधवलाई फर्काए यस्तो मुखतोड जवाफ !PM Kp Sharma Oli